I-AdraInformatica- Itekhnoloji, iHardware, iSoftware, iZikhokelo kunye neeNkqubo
Itekhnoloji, iHardware, iSoftware, iZikhokelo kunye neeNkqubo
Kuthunyelwe ngo-Agasti 23, 2021
Isikhokelo kumdlalo wevidiyo iBayonetta 3
I-Bayonetta 3 sisavenge sesithathu, siqulunqwe kwaye saphuhliswa yiPlatinumGames, ye-hack eyaziwayo kunye ne-slash saga ejongene negqwirha elidumileyo. Umdlalo wevidiyo uyilelwe kuphela iNintendo Shintsha, ikhonsoli yeNintendo.
Umdlalo wevidiyo ekucetyiswa kakhulu kubo bonke abalandeli bomdlalo yiBayonetta 3. Lo mdlalo wevidiyo ngalo lonke ixesha isaziwa ngakumbi phakathi kwabalandeli bayo kunye nabo bathatha isigqibo sokuzama. Kwaye kuyaziwa ukuba ukudlala umdlalo weBayonetta 3 kuyinto entle.
Kwesi sikhokelo silandelayo uyakufumana ulwazi onokuthi uqale ngalo ukudlala iBayonetta 3 kuya kuba lula kakhulu kuwe. Ukongeza, ineengcebiso zokuqala ukudlala umdlalo ngaphandle kokuba ube lihobe eliwele kwindlwane, kuba nangona ungangabi yingcali, ubuncinci uya kufunda iziseko.
Inini inkulumbuso yomdlalo?
Omnye wemihla ekucingelwa ukuba yeyabalandeli be Bayonetta 3 es umhla wokukhupha, ngeli xesha umdlalo wevidiyo uza kukhutshwa kwaye uya kufumaneka kwi consoles-ezikhoyo. Enye yezona zinto zinqweneleka kakhulu kukwazi onke loo mathuba aza kuwenza afumaneke kunye neendaba eziza kothusa ezi zilandelayo.
Iingcebiso zokuma ngaphandle kwiBayonetta 3
Ke, kufanelekile ukuqala ukukhankanya ifayile ye- amaqhinga aya kuba luncedo kuwe, ngeli xesha iBayonetta 3 isezandleni zakho, Ufumana imidlalo eneziphumo ezingcono kakhulu. Ezi zezinye.
Fumana amava kwaye uphakamise inqanaba lakho: Ukuphucula kunye nokuma ngaphandle kuya kukunika amathuba kwaye uya kufumana ithuba lokudlala ngaphezulu kwabanye abadlali. Ngale ndlela uza kunyuka uphucule amathuba omlinganiswa wakho, kunye nezakhono zakho.
Fumanisa ukuba yeyiphi iBayonetta 3 enayo: Akuyi kubakho sixhobo silunge ngakumbi kunolwazi. Ukugcina engqondweni ukuba zeziphi izixhobo ezibekwa ngumdlalo wevidiyo ukoyisa izithintelo kubalulekile ekusombululeni iingxaki ngokukhawuleza.
Yenza izicwangciso ezintsha: Nokuba uyakhile qhinga ngazo ukhululekile, musa ukuyeka ukwenza izinto ezintsha, kuba ikunika ithuba lokufumana ubuchule obuya kukunceda uphucule.
Yenza ulawulo kunye noseto: Guqula ubukhali, ulawulo kunye nazo zonke iisetingi onokuzenza ukuze ukudlala kube lula kuwe. Ukwenza ulwenziwo ngokwezifiso kukuvumela ukuba uhlengahlengise umdlalo kwiimfuno zakho ukuze iziphumo zakho zibengcono.
Amaqonga apho unokuzama iBayonetta 3
Ngethamsanqa, umdlalo wevidiyo ingadlalwa kwimixokelelwano eyahlukeneyo nakwi-PC, emva koko, akukho sizathu sokuyeka ukuvavanya ingxelo eza kukhutshwa. Ezinye iindlela ezizakwenziwa zifumaneke ukuze ziyidlale kwikhonsoli ziya kuba Isikhululo sokudlala y Xbox, ngazo uya kufumana ithuba ukudlala nabanye abadlali online okanye udlale imidlalo ekuhlaleni ukuba ukhetha njalo.
Ngendlela efanayo iya kufumaneka dlala efini ngokusebenzisa amaqonga anjengeSteam kunye neStadia yePC. Ukuzisebenzisa akuyi kufuneka ukuba ube nekhonsoli yamva nje kwintengiso okanye ikhompyuter eneempawu ezizodwa kuyo ube super imidlalo fun.
Yintoni abadali bayo abayifunayo kukuba abantu abaninzi kangangoko banakho ukufikelela kwiBayonetta 3. Ke iya kukhutshwa kwiinguqulelo ezahlukeneyo Ukudlala apho kuya kuba lula kwaye kumnandi, konke kuxhomekeke kukuthanda kwakho.
Ngoku ukuba awukwazi ukuthenga zonke iinguqulelo ozifunayo kwaye endaweni yoko kuya kufuneka uthathe isigqibo kwinto enye, ungakhathazeki, zonke iinguqulelo zinolonwabo olukhulu kwaye ziqinisekisa ukuba uyokonwabela imidlalo ezizodwa ngokwahlukeneyo nangamaqela.
Ngaba unqwenela ukufumana iBayonetta 3? Nazi ezinye iindlela onokukhetha kuzo
Ukuba ufuna ntoni fumana i-bayonetta 3Kuya kufuneka undwendwele eyakho ivenkile oyithandayo, ukuya apho uhlala usiya khona. Emva kokuba umhla wokukhutshwa ufikile, unokuwufumana kuzo zonke iikhonsoli ezikhoyo ngexabiso elifikelelekayo.
Oku kuqhelekile ngaphezu kwayo nayiphi na into enayo imidlalo yeengcebiso njengePlayStation, okanye iXbox; Consoles apho iidrama zabo ziziva zizolile kwaye bonwabele ukuba Inguqulelo yoqobo yemidlalo.
Enye indlela, ukuba awufuni ukushiya ikhaya lakho, uyokuthenga nge-Intanethi. Ungazenza ngazo iivenkile zomdlalo wevidiyo okwi-intanethi, okanye kwi amaqonga akwi-intanethi, ngendlela elula neqinisekileyo.
Si Ivenkile kwezi venkile zikwi-intanethi, ugcina ixesha kunye nomzamo kwaye iodolo yakho iya kufika emnyango wendlu yakho, okanye unokucela uguqulelo olubonakalayo, ulikhuphele kwaye ulifake kwikhonsoli yakho.
Kodwa namaqonga anje ngeStadia okanye iSteam, akuvumela ukuba ukonwabele emva kokukhupha intlawulo, usebenzisa iiseva zabo, oko kuthetha ukuba ungadlala nje ukuba uqhagamshele kwi-Intanethi kwaye ungaphantsi kobhaliso.
Ukuqesha le nkonzo kuthetha ukuba, kwixesha elifutshane, a ukukhutshwa okuncinci ngaphezu kokuthenga umdlalo wokuqala, kunye nokuvumela ukuba udlale imidlalo emininzi eyahlukeneyo ngexesha elincinci.
Funda ukudlala iBayonetta 3
Akukho nto iqinisekileyo kunentetho Ukuziqhelanisa kwenza inkosi, kwaye eyona ndlela yokugqwesa kwinto ethile kukuba uyenze kakuhle. Okukhona usenza umsebenzi, kokukhona uya kuba yingcali.
Kuyafana nangemidlalo. Okukhona unegqala, kokukhona uya kuphendula ngakumbi kunye nengqondo yakho uya kuba nakho ukwakha ubuchule obuntsonkothileyo. Ke ukuba ufuna ntoni funda ukudlala iBayonetta 3 Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuzola kunye nokuziqhelanisa rhoqo.
Ukuze ube ngowona uphambili kufuneka hlangana neentshaba zakho. Indlela yokuhamba kwabo, amacebo abo kunye nobuchule. Ukuziqonda kuyakufuneka uzihlalutye ngononophelo. Zizinto eziya kuba luncedo kuwe ukoyisa zona. Uyakwazi ukufumanisa ukuba ngawaphi amandla kunye nobuthathaka bawo. Kwakhona, kufuneka yazi indlela yokuziphatha yabachasi bakho. Nokuba zizii-NPC okanye abadlali bokwenyani, bonke basebenzise izakhono kunye neendlela zokuba, ukuba uyabazi, unokufumanisa ukuba ungazitshabalalisa ngokulula njani kwaye ube zezona zilungileyo.
Ukuba unokuzihlalutya ngokufanelekileyo, unokufumana ubuthathaka bazo kwaye uya kuyazi indlela yokusebenzisa iimpazamo zabo. Ukwazi umchasi wakho kukunika ithuba elingaphezulu kwakhe.
Kodwa linda, umbuzo awupheli kumchasi. Uya kufikelela kwinqanaba apho uya kuba namandla khona, ukuze uzenze utshaba lwakho, ngendlela elungileyo. Camngca ngamaqhinga akho kwaye isebenza ngcono yonke imihla. Ungahlala ungcono.
Kumzuzu apho ufunda abanye abakhuphisana nabo unokufumana amandla kunye nobuthathaka babo. Eyona nto unokuyenza kukuthatha yonke into ekuncedayo, ayisiyonto yokwenza izicwangciso zabo ngokufanayo, kodwa malunga nokufunda kubo kunye nokongeza isitayile sakho kubo.
Okokugqibela, misela amacebo, dlala ngokuzolileyo, kwaye uhlale udlala ngokungafihlisiyo. Ezi zezona ndawo ziphambili zokuba ngowona mdlali ubalaseleyo weBayonetta 3. Landela ezi ngcebiso kwaye uya kusondela kufutshane ube yinkwenkwezi.
Kuthunyelwe ngo-Agasti 13, 2021
Lonke ulwazi olufunekayo ukuze ukwazi ukuqala ukudlala iElden Ring
I-Elden Ring ngomnye wemidlalo leyo yongeza abalandeli abaninzi. Indlela yayo ephucukileyo yokuphuhlisa kunye nokubandakanya umdlali ibangela abalandeli bayo ukuba baphele benyanisekile kwaye abo bangekayonwabisi bafuna ukuyidlala.
Kulabo baqala ukuzama iRingi ye-Elden, sinika esi sikhokelo sibanzi sinengcebiso eziluncedo kakhulu. Ngolu lwazi unokufumana umbono ocacileyo wento ekufuneka uyenzile ukuqala ukudlala ngaphandle kokuphazamiseka ngokupheleleyo.
Umhla wokukhutshwa komdlalo
Abalandeli baka Elden Ring Kufanele ukuba sele belungiselela inkulumbuso yomdlalo oza kwenzeka kungekudala umhla wokukhupha, abanokudlala kuyo consoles-ezikhoyo. Ngemidlalo yevidiyo ebalaseleyo, ukufika komdlalo wevidiyo kulangazelelwe ukuba ukwazi ukonwabela zonke izinto ezintsha oza kuzizisa nazo.
Iingcebiso zokuma ngaphandle kweRingi ye-Elden
Iyachukumisa, qala ukukhumbula ifayile ye- iingcebiso zokukunceda, ngelixesha iElden Ring isezandleni zakho, unokufumana imidlalo ngokusebenza okungcono. Sinezinto ezenzelwe wena.
Fumana amava kunye nenqanaba eliphezulu: Inkqubela phambili kunye nokuvela kuya kukunika amathuba ngakumbi kwaye uya kuba nethuba ngaphezulu kwabanye abadlali. Ngale ndlela uya kunyuka kwaye uphucule amathuba omlinganiswa wakho, ukongeza kwizakhono zakho.
Fumanisa ukuba yintoni i-Elden Ring enayo: Akuyi kubakho sixhobo silunge ngakumbi kunolwazi. Ukugcina engqondweni zeziphi izixhobo ezibekwa ngumdlalo wevidiyo ukoyisa imiqobo kubalulekile ukusombulula ngokukhawuleza iingxaki
Amava ngeendlela ezahlukeneyo zokudlala: Ngamanye amaxesha indlela yokudlala Iyasisebenzela, kodwa ngokuzama iindlela ezintsha unethuba elingcono lokufumana iindlela zokuphucula kunye nokufezekisa injongo ngobuchule obukhulu.
Yenza useto oludingayo: Ukwenza utshintsho onokulwenza kuseto lomdlalo kunokukunceda ukuba uhambe ngokulula ngelixa udlala umdlalo. Olunye uhlengahlengiso onokulenza lunokwenza nescreen, isandi, ulawulo, okanye nantoni na ekuvumela ukuba udlale ngcono.
Zeziphi iindlela onokuthi udlale ngazo i-Elden Ring kwi-Intanethi?
Ngethamsanqa, ungawudlala umdlalo kwiikhonsoli ezahlukeneyo nakwikhompyuter, ke akukho sizathu sokuyeka ukuzama uguqulelo oluya kukhutshwa. Ezinye zeendlela ezizakufunyanwa ziyonwabele kwikhonsoli zezi Isikhululo sokudlala y Xbox, apho kunokwenzeka khona ukudlala nabanye abadlali online okanye udlale imidlalo ekhaya ukuba uyafuna.
Eyona njongo iphambili ye- Qalisa kwiinguqulelo ezahlukeneyo Okokuba umdlalo wevidiyo ulawula ukufikelela kubaphulaphuli abakhulu kwaye nokwabelana nabanye abadlali kulula kwaye kuyonwabisa. Ngokwezinto ozithandayo, unethuba lokukhetha naluphi na ukhetho olunikezelwa yi-Elden Ring.
Ngokunjalo, zonke iinguqulelo ziyahlekisa kwaye zibonelela ngokubakho bonwabele amava abalaseleyo ngokwahlukeneyo nangamaqela.
Enkosi kwezi ndlela unokufumana i-Elden Ring
Into yokuqala ekufuneka uyenzile Thenga iElden Ring kukuya kwivenkile ekufutshane nendlu yakho, okanye leyo uhlala usiya kuyo. Emva komhla wokukhutshwa komdlalo wakho, kwaye kwezi ntsuku zilandelayo, uya kuba nakho ukuyibona ifumaneka kuwo onke amaqonga ayo.
Kuzo zonke Abadlali bokwenyani, kuhlala kungcono ukuba ne Inguqulelo yoqobo yemidlalo yevidiyo. Ngale ndlela, bayasebenzisana ekudalweni kwemidlalo yevidiyo ngakumbi kwaye baxhasa iifranchise ezinkulu.
Kodwa awuyi kuyifumana kuphela kumaziko oqobo, kodwa uya kuba nakho ukuyithenga ngaphakathi iivenkile zomdlalo wevidiyo okwi-intanethi okanye ngaphakathi amaqonga akwi-intanethi apho nje ngokuba neakhawunti, uya kuba nakho ukuthenga.
Si uthenga kwezi venkile zikwi-intanethi, ugcina ixesha kunye nomzamo kwaye iodolo yakho iyakufika emnyango wakho, okanye ungathenga nohlobo lwenyani, uyikhuphele kwaye uyifake kwikhonsoli yakho.
Ukongeza kwiivenkile zomdlalo wevidiyo, kukho ukhetho lokudlala ngokuqesha iphakheji yokubhalisela. Kule meko, awuyithengi umdlalo ngokwawo, kodwa ilungelo lokusebenzisa iintlobo ezininzi zezihloko ixesha elimiselweyo. Injalo imeko yeStadia okanye iSteam.
Eyona nto intle malunga nala maqonga lixabiso lawo. Hlawula umrhumo ibiza kancinci kakhulu kunokuthenga umdlalo wevidiyo, kunye nokwenza kube lula ukungena kuluhlu olubanzi lwezihloko.
Ungaba mkhulu njani kwiRingi ye-Elden?
Sonke siqala njengee-novice ngalo lonke ixesha sifumana into eyahlukileyo, nokuba siphi na amava angaphambili esinawo kwezinye iindawo, ukuqala into kwasekuqaleni kuhlala kungamava amatsha, kodwa phumla, ngomzamo uya kuba yingcali.
Njengoko besesitshilo, kuya kufuneka uzilolonge kuyo yonke into onethemba lokuba uza kuyenza ngendlela elungileyo. Ngeli xesha, imidlalo yevidiyo. Okukhona uziqhelisa, kokukhona unako funda iimfihlo zeringi ye-Elden. Injalo imeko, ukuba ufuna ntoni na ube ngumdlali obalaseleyo we-Elden Ring, emva koko sicebisa ukuba uqale ukuziqhelanisa, uya kuyiphumeza ngokunyamezela.
Ukuze ube ngowona uphambili kufuneka dibana nabachasi bakho. Uhlobo lwentshukumo yabo, amacebo abo kunye nezakhono. Ngenxa yoku kufuneka uzihlalutye ngononophelo. Zizinto ezincinci eziya kuba luncedo kakhulu kuzoyisa. Uyakwazi ukufumanisa ukuba zeziphi izinto eziluncedo kunye nobuthathaka kuzo. Thatha izibonelelo zakho kwaye usebenzise ezimbi. Ukuba uyenza ngokufanelekileyo, unokuzisusa ngokulula. Nokuba zii-NPC okanye abadlali bokwenyani, bonke basebenzisa izakhono kunye neendlela zokuba, ukuba uyabazi, ungayibona indlela yokubabetha ngokulula kwaye ungabonakala.
Nje ukuba uqikelele ukuba zeziphi izinto ezingaphantsi kuye, mbethe apho iyeyona nto ibuhlungu kwaye umoyise. Ukuba linyathelo elinye phambili kuhlala kuyinzuzo enkulu.
Kodwa linda, umba awupheli ngomchasi. Uya kufikelela kwinqanaba apho uya kuba namandla khona, ukuze ube ngumchasi wakho, ngendlela elungileyo. Funda amaqhinga akho kwaye uziqhelise ukuba ngcono yonke imihla. Ungahlala uphucula.
Ukongeza kwi fumana ubuthathaka beentshaba zakho, uya kufumanisa ukuba yintoni na amandla abo. Xa usiya kweyona nto intle kuya kufuneka uchonge ukuba uza kusela ntoni na kwityeli ngalinye. Ukuba kunjalo, ngekhe kubi ukubona ukuba zeziphi izinto ezisebenza kwabanye abadlali kwaye uzilungelelanise nendlela yakho yokudlala.
Okokugqibela, zola, sukutsiba ngokungenalusini kwaye uphakamise iqhinga elilungileyo eliya kwenza kube lula kuwe ukuba usabele ngendlela echanekileyo, ukufikelela kwiziphumo ezilungileyo. Ukuba uyakwazi ukulandela le miyalelo, unokuba yiyo eyona nto ibalaseleyo kwiElden Ring.
Kuthunyelwe ngo-Agasti 5, 2021
Ngaphandle kwesiKhokelo seMidlalo esiLungileyo nesibi
Omnye wemidlalo leyo ufumana abalandeli ngakumbi Kwaye ukuthatha umfutho ongaphaya kokuNgaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2. Lo mdlalo ukukunika indlela eyonwabisayo nenomdla yokuqhuba imidlalo engoyikiyo, nokuba umtsha okanye sele uwudlalile umdlalo ngaphambili.
Ngoku, ulwazi esilubonisayo kwesi sikhokelo lunokuba luncedo kakhulu ukuba uqala ukudlala ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2 kwaye ufuna ukufumana ithuba. Ngengcebiso esiza kukunika yona apha ngezantsi, usenokungabi yingcali, kodwa nangona kunjalo, uya kuba nolwazi olusisiseko oluza kukunceda
Liphi inkulumbuso ye-Beyond Good & Evil 2?
Sele ipapashiwe ukuba umhla wokukhutshwa Ngaphandle kokulungileyo nobubi 2 yiba ngu umhla wokukhupha, ukusukela ngalo mzuzu ukubheka phambili, abalandeli bakhe abanakunceda kodwa babe nexhala lokwazi ukuba zeziphi izinto ezintsha ezinokuvezwa yile nguqulo, ezinokudlalwa consoles-ezikhoyo.
Amaqhinga okuma ngaphandle kokuLunga kunye nokubi 2
Ke kuya kuba kuhle ukuqala ukukhankanya ifayile ye- iingcebiso zokukunceda, ke xa ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2 kusezandleni zakho, Yonwabela imidlalo eneziphumo ezingcono. Sinezinto ezenzelwe wena.
Qhubeka uziqhelanise kwaye uphakamise inqanaba lakho: Ukufezekisa izicwangciso zakho kunye nokufikelela kwinqanaba eliphezulu kuya kukwenza ube ngumdlali ongcono. Ukongeza, ukunyuka phezulu kumdlalo kuvula izixhobo eziza kukunceda ufezekise injongo yakho.
Fumanisa ukuba yintoni engaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2: Akukho sixhobo siluncedo ngakumbi kunolwazi. Ukuhlala ukhumbula ukuba zeziphi izixhobo ezibekwa ngumdlalo wevidiyo ukoyisa izithintelo kulungele ukuphendula ngokukhawuleza kwiingxaki
Sebenzisa iindlela zakho ngeendlela ezahlukeneyo: Okungakumbi buchule Okukhona uzama, kunokwenzeka ukuba ufumane okanye wenze intshukumo eya kukwenza oyena mdlali ubalaseleyo.
Yenza ulungelelwaniso kulawulo kunye noseto: Lungisa isisombululo, ulawulo kunye nazo zonke iisetingi ezivumela ukuba zenze ukudlala kube lula kuwe. Ukucwangcisa ulawulo kukunika ithuba lokubeka umdlalo kwinqanaba lakho lokuthuthuzela ukufezekisa iziphumo ezifanelekileyo ngexesha lemidlalo.
Iimowudi onokuzama ngazo ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2
Inguqulelo entsha ye-Beyond Good & Evil 2 igubungela zonke izinto ozithandayo, ukuba uyayithanda induduzo okanye ukhetha iPC, Uyakwazi ukuzama umdlalo wevidiyo ngeendlela ezahlukeneyo. Ngekhonsoli, ungayifumana IPlayStation, iXbox , phakathi kwabanye, ukukunika ithuba lokuzama ekhaya okanye qhagamshela nabanye abadlali kwi-intanethi.
Kodwa nawe unako dlala efini ngokusebenzisa amaqonga anje ngeSteam kunye neStadia yekhompyuter. Ngale nto ungayenza ngaphandle kwekhonsoli yamva nje kwintengiso okanye iPC eneempawu eziphambili ukuya dlala imidlalo emnandi.
Injongo ye release Kwiinguqulelo ezahlukeneyo kukuba umdlalo ufikelela kubaphulaphuli abakhulu kwaye ukudlala nabanye abadlali kuyafikeleleka kwaye kumnandi. Kuxhomekeka kukhetho lwakho, unethuba lokukhetha naluphi na ukhetho olunikezelwa ngapha kokuLungileyo kunye nokubi 2.
Ngoku ukuba akukwazeki ukuba ufumane iinguqulelo ezininzi ngendlela onqwenela ngayo kwaye kuya kufuneka uthathe isigqibo kwinguqulelo enye, ungaziva ungalunganga, nganye yeenguqulelo zakho ziyonwabisa kwaye ziqinisekisa ukuba uyakuphila Imidlalo engoyikiyo yomntu ngamnye kunye nabanye abadlali.
Ungathenga phi ngaphandle kokuLungileyo kunye nokubi 2?
Into yokuqala onokuyenza zisa ngaphaya kokulungileyo kunye nobubi 2 kukuya kwivenkile ekufutshane nekhaya lakho, okanye leyo uhlala usiya kuyo. Emva komhla wokukhutshwa komdlalo wakho, kwaye kwiintsuku eziqhubekayo, uya kuba nakho ukuyibona ifanelekile kuwo onke amaqonga ayo.
Kuqhelekile kwezi ntsuku ukuba abalandeli beekhonsoli ezinje ngePlayStation, okanye iXbox bonwabele ukuba Iinguqulelo zoqobo zazo zonke izinto ezikhutshwayo.
Kwaye ukuba awunayo ivenkile yemidlalo yevidiyo kufutshane, ungakhathazeki, unokuthenga nemidlalo oyithandayo yevidiyo iivenkile zomdlalo wevidiyo okwi-intanethi, okanye ngaphakathi amaqonga akwi-intanethi, ukuba unayo iakhawunti oyithengayo.
Thenga kwiivenkile ezikwi-Intanethi Iyafana nokuthenga ekhaya, ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo. Ukongeza, olu khetho luvumela isihloko sakho ukuba sifike emnyango wendlu yakho okanye, ukuba unqwenela, unokukhetha uguqulelo oluyinyani, olifaka ngokuthe ngqo kwikhonsoli yakho.
Kukho iinkonzo zeqonga lomdlalo wevidiyo. Kula maqonga ungadlala usebenzisa iiseva zeqonga, usebenzisa inkonzo ehlala kwilifu. Ukwenza oku, kuya kufuneka unxibelelwano lwe-intanethi kwaye uhlawule umrhumo.
Ukuqesha le nkonzo kuthetha ukuba, kwixesha elifutshane, a ukukhutshwa okuphantsi ngaphezu kokufumana umdlalo wevidiyo wokuqala, kunye nokunceda ukudlala imidlalo eyahlukeneyo yexesha elithile.
Ezinye iingcebiso zokuba zezona zibalaseleyo ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2
Akukho nto iyinyani kunentetho Ukuziqhelanisa kwenza inkosi, kwaye eyona ndlela yokuphucula into kukuyisebenzisa. Okukhona usenza umsebenzi, kokukhona ufumana ubuchule.
Kwalengqondo inye ikwabalulekile kwimidlalo yevidiyo. Ukuba unqwenela ukuba ngutitshala, kufuneka uziqhelanise. Ngale nto, ingqondo yakho iya kulungelelanisa imiyalelo kunye nobukrelekrele bokungaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2, ukudala izicwangciso kunye nezicwangciso ezingcono. Ke ukuba uyafuna ube ngutitshala ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2, qala ukuziqhelisa.
Enye into enokukunceda kakhulu yile funda indlela eziphatha ngayo iintshaba zakho. Ukuqikelela intshukumo yotshaba kunye nokuhlalutya amaqhinga abo kungakusondeza ekufumaneni ubuthathaka babo. Uyakwazi ukufumanisa ukuba zeziphi izinto eziluncedo kunye nobuthathaka kuzo. Uyakufuna yazi indlela yokwenza iintshaba zakho. Nokuba zizii-NPC okanye abadlali bokwenyani, bonke basebenzisa izakhono kunye namaqhinga okuthi, ukuba uyawafunda, uya kuba nakho ukufumanisa indlela yokuwaphelisa ngokulula kwaye ungoyena ulungileyo.
Xa ufumene ukuba buthini ubuthathaka bakhe, mhlasele apho iyeyona nto ibuhlungu kwaye umbulale. Ukuhlala inyathelo elinye phambili kuhlala kuthetha amathuba angcono.
Ngokufanayo, Fumanisa ukuba zeziphi iintsilelo zakho Iya kukunceda ukubomeleza kwaye ikomelele, ke jonga kwakhona amaqhinga akho kwaye uboyise ngalo lonke ixesha unethuba. Ayinamsebenzi ukuba bakuncedile ngaphambili, ngokuqinisekileyo ungakhula ngakumbi.
Del Uhlalutyo lwabachasi bakho Uya kufumana iintlobo ezimbini zezinto: ezo bazenza kakuhle kwaye ezo bangazenzi kakuhle. Kokungalunganga esele senze amagqabantshintshi; uthathe inxaxheba kubo. Kuhle ukufunda kwabo baqhuba kakuhle. Ayikokukopa ngokulula, kungcono ukuyilungelelanisa neendlela zakho zokudlala, ukuze uqhubeke kwindawo oqhuba kakuhle kuyo.
Okokugqibela, musa ukwenza ngokungxama, cwangcisa amacebo akho kakuhle kwaye usete iinjongo zexesha elifutshane. Ngale ndlela uya kuthi ufikelele usukelo lwakho ngokuthe ngcembe. Ukuba ulandela ezi ngcebiso, suku ngalunye uya kusondela kubukho eyona ilungileyo ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2.
Kuthunyelwe ngo-Agasti 2, 2021
Isiqithi esifileyo 2 Isikhokelo somdlalo wevidiyo
Isiqithi esifileyo 2 yenye yemidlalo yevidiyo leyo izuza abalandeli ngakumbi. Indlela yayo emnandi yokuzibonakalisa kwaye ibandakanye umdlali ibangela ukuba abo bayidlalayo bathembeke ngakumbi kwaye abo bangekayidlali bafuna ukuyizama.
Kulabo batsha kwi-Dead Island 2, sinika esi sikhokelo siqulathe iingcebiso eziluncedo kakhulu. Ngolu lwazi uya kuba nakho ukuba nombono obanzi wento ekufuneka uyenzile ukuqala ukudlala ngaphandle kokulahleka ngokupheleleyo.
Sele esidlangalaleni ukuba umzuzu wokuphehlelelwa IsiQithi sase-2 esiFileyo yiba ngu umhla wokukhuphaUkusukela olu lwazi lanikwa, abalandeli bakhe khange bakwazi ukunceda kodwa bonwabe ukwazi ukuba zeziphi izinto ezintsha ezinokuza nale nguqulelo ezinokonwabela consoles-ezikhoyo.
Iingcebiso zokuma kwi-Dead Island 2
Eli lelona xesha lilungileyo lokukhankanya ezinye kuwe Amaqhinga ukuze ukwazi ukwenza imidlalo kwi-Dead Island 2 eneziphumo ezilungileyoKe xa umdlalo ukhutshwa uyakufumana inyathelo elinye phambili. Ezi zidweliswe apha ngezantsi.
Yandisa amava akho kunye nenqanaba phezulu: Ukuphucula kunye nokuvela kuya kukuvulela iingcango kwaye uya kuzuza ithuba ngaphezulu kwabanye abadlali. Le yindlela oya kunyuka ngayo kwaye uphucule amathuba ophawu lwakho, ukongeza kwizakhono zakho.
Funda ngezixhobo onokuzisebenzisa kwi-Dead Island 2: Into eza kukubeka inyathelo eliya phambili kukwazi izixhobo ezikunika umdlalo wevidiyo. Ngokwazi ukuba uyisebenzisa njani kwaye uyisebenzisa nini i-Dead Island 2, uya kuba nakho ukuyisebenzisa ngexesha elifanelekileyo ukufikelela kwinjongo
Zama iindlela ezininzi zokudlala: Ngamanye amaxesha indlela yokudlala Iyasisebenzela, kodwa ngokuzama iindlela ezintsha unethuba elingcono lokufumana iindlela zokuphucula kunye nokufezekisa injongo ngokulula.
Lungisa useto ukuthanda kwakho: Ukuba nemidlalo apho iisetingi zikunika intuthuzelo ikunika ithuba lokufumana iziphumo ezingcono. Ukulungisa iscreen kunye neseto somsindo kunye noku-odola ulawulo ngokhetho lwakho kuluncedo kakhulu.
Iimowudi apho ungadlala khona Isiqithi esiFileyo 2
Akuyi kubakho namnye ongathabathi nxaxheba, Isiqithi esifileyo 2 siya kufumaneka kubo bobabini abakhetha iiconsoles okanye iPC, Ukwenza ukuba zombini iindlela zifumaneke. Phakathi kweekhonsoli eziya kuthi zinike ithuba lokonwabela umdlalo wevidiyo zezi Isikhululo sokudlala y Xbox, apho abadlali banakho dlala ekuhlaleni okanye ngokudibanisa nabanye abadlali kwi-intanethi.
Kodwa iya kubakho dlala efini ngamaphepha afana neStam kunye neStadia kwiPC. Ukuzisebenzisa, akuyi kuba yimfuneko ukuba neconsole yamva nje kwintengiso okanye ikhompyuter eneempawu ezizodwa nandipha imidlalo eyonwabisayo kakhulu
Ngokunjalo, kuya kubakho ithuba lokwenza njalo dlala efini, emva koko awuzukufuna ukuba neqela eliphambili ukuvavanya i-Dead Island 2. Kwiseva zamaqonga afana neStam neStadia, uya kuba nakho dlala imidlalo emnandi ngokukhawuleza.
Ewe kunjalo, injongo kukukholisa abaphulaphuli ababanzi. Yale uya kufumana iinguqulelo ezahlukeneyo zeSiqithi esifileyo 2 Ukuphendula kwiimfuno ezininzi, yonke into iya kuxhomekeka kukhetho umntu ngamnye analo xa ukhetha olona khetho lufanelekileyo.
Inguqulelo nganye inika ulonwabo olukhulu, ke ungakhathazeki ukuba kuya kufuneka uthathe isigqibo kwenye yazo. Unamava amnandi apho uya kuba nethuba lokuzama ngokwakho kunye nabanye abantu Kukhuselekile.
Ngale ndlela unokuthenga i-Dead Island 2
ukuba Fumana i-Dead Island 2 Kuya kufuneka uye ku Indawo yokudlala okukufutshane okanye yiya kuleyo uzithemba ngakumbi ngayo. Emva kokusungulwa uya kufumana zonke iindlela zayo ngexabiso elifikelelekayo.
Oku kuqheleke kakhulu kunako konke nge imidlalo yeengcebiso njengePlayStation, okanye iXbox; Consoles ukuba abasebenzisi bayo bonwabile kwaye bayathanda ukuba ngabanini Inguqulelo yoqobo yemidlalo.
Kodwa ukusekwa komzimba ayisiyiyo kuphela indlela. Ukuba awunaso nasiphi na isiseko esiseduze, okanye awufuni ukushiya indlu yakho, unokuzithenga kuyo kwiivenkile ezikwi-intanethit amaqonga akwi-intanethi.
Indawo eqinileyo yezi venkile yile akufuneki ushiye indlu yakho uyokuthenga. Umdlalo ufika kanye emnyango wakho, okanye ungayikhuphela emva kokukhupha intlawulo kwaye uyifake kwangoko.
Kodwa namaqonga anje ngeStadia okanye iSteam, akuvumela ukuba wonwabe emva kokwenza intlawulo, usebenzisa iiseva zabo, oko kuthetha ukuba ungadlala nanini na xa uqhagamshelwe kwi-Intanethi kwaye ungaphantsi kobhaliso.
Sebenzisa le nkonzo kuthetha, kwixesha elifutshane, a intlawulo ephantsi ngaphezu kokufumana umdlalo wevidiyo wokuqala, kunye nokunceda ukusebenzisa izihloko ezininzi ngexesha elithile.
Unokuba ngcono njani kwi-Dead Island 2?
Sonke siqala ukuba zii-novice ngalo lonke ixesha sifumana into entsha, ngaphandle kolwazi oludlulileyo esinalo kwezinye iindawo, ukuzama into kwasekuqaleni kuhlala kuvelisa imvakalelo eyahlukileyo, kodwa uzolile, ngomsebenzi uba yingcali.
Kukwanjalo nakwimidlalo yevidiyo. Amava onawo, ukuphendula okungcono oya kuba nako kunye nengqondo yakho unakho ukwakha amaqhinga angcono. Ke ukuba ufuna ntoni funda ukudlala i-Dead Island 2 Into ekufuneka uyenzile kukuba ube nomonde kwaye uziqhelanise rhoqo.
Enye into enokwenza umsebenzi wakho ube lula kakhulu kukuba hlalutya amacebo eentshaba zakho. Ukuxela kwangaphambili ukuhamba kweentshaba kunye nokuqonda amaqhinga abo kunokukubeka kufutshane ekucaciseni iindawo zabo ezibuthathaka. Uyakwazi ukufumana into eyenzayo elungileyo nengalunganga. Uyakufuna funda indlela yokudlala kubachasi bakho. Nokuba zizii-NPC okanye abadlali bokwenyani, bonke basebenzisa izakhono kunye namaqhinga okuthi, ukuba uyabazi, unokufumanisa ukuba ungaboyisa njani ngokulula kwaye ungoyena ubalaseleyo.
Ngokwazi ukuba utshaba lwenza into elungileyo nokuba yintoni engalunganga, uya kuba nethuba elingaphezulu kwakhe. Kuya kuxhomekeka kumava akho ukuze ube nakho ukusebenzisa eli thuba ukuze uphumelele.
Kwakhona, Chonga ubuthathaka bakho Iya kukunceda ukubomeleza kwaye ikomelele, ke funda izicwangciso zakho uziphucule ngalo lonke ixesha unethuba. Ayinamsebenzi ukuba bakukhonze ngaphambili, ngokuqinisekileyo ungaphucula.
Del Uhlalutyo lwabachasi bakho Uya kufumanisa izinto ezimbini: zeziphi ezilungileyo kwaye ezingalunganga kangako. Kokubi sele sizichaza; uthathe inxaxheba kubo. Izinto ezintle zilungile ukuba zifunde. Ayisiyokwenza nje kuphela njengoko injalo, eyona nto ifanelekileyo kukuyiqhelanisa neendlela zakho kunye nendlela yakho yokudlala, ukuze uqhubeke kwindawo apho uzolile khona.
Okokugqibela, musa ukuphambana, bambelela kumaqhinga akho kwaye usete iinjongo zexesha elifutshane. Ngale ndlela uya kuba nakho ukufezekisa iinjongo zakho kancinci kancinci. Ukuba ulandela ezi ngcebiso, uya kuba kufutshane nokuba enye yezona zinto zihamba phambili kwi-Dead Island 2.
Yonke into ofuna ukuyifumana ukuqala ukonwabela ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2
Enye yeemidlalo zevidiyo Iya isanda ngokuthandwa Ukuthatha i-boom engaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2. Lo mdlalo wevidiyo unikezela ngamava amnandi nawonwabisayo onokukhulisa ngawo imidlalo engenakuthelekiswa nanto, nokuba usaqala okanye sele uwudlalile umdlalo ngaphambili.
Ukongeza, ulwazi olukwesi sikhokelo lunokuba luncedo kakhulu ukuba uyaqala ngaphandle kokuLungileyo kunye nokubi 2 kwaye ufuna ukuba nethuba elithile. Ngeengcebiso esinazo ngoku, usenokungabi yingcali, kodwa uya kufumana ulwazi olusisiseko oluya kukunceda
Iifani ze Ngaphandle kokulungileyo nobubi 2 balungiselela ukufumana iphambili yomdlalo kungekudala umhla wokukhupha, onokuyonwabela consoles-ezikhoyo. Ngomdlalo wevidiyo omangalisayo, ukufika komdlalo wevidiyo kulindeleke ukuba ube nakho ukonwabela zonke iindaba eziza kuzisa.
Iingcebiso zokuma ngaphandle kokuLunga kunye nokubi 2
Ngokucacileyo lelona thuba lilungileyo lokukunika amaqhinga enza ukuba kube lula kuwe ukwenza imidlalo engakholelekiyo xa ungaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2 usezandleni zakho. Ezinye zezi zilandelayo.
Yandisa amava akho kwaye uphakamise inqanaba lakho: Ukuqhubela phambili nokuvela kuya kukunika amathuba ngakumbi kwaye uya kuba nethuba ngokunxulumene nabanye abadlali. Ngale ndlela uya koyisa kwaye uphucule amathuba ophawu lwakho, ukongeza kwizakhono zakho.
Fumanisa ukuba yintoni engaphaya kokuLungileyo kunye nokubi okukunika: Ukuba kukho into eza kukunika ithuba, "yazi." Ukuchaza ukuba zeziphi izixhobo zomdlalo kunye nendlela ezinokusetyenziswa ngayo kubalulekile ukoyisa imiqobo enokuba kumdlalo
Sebenzisa amaqhinga enoveli: Nokuba wenze ifayile ye qhinga Oziva wanelisekile ngayo, soloko uzama izinto ezintsha, kuba ikunika ithuba lokufumana ubuchule obuya kukuvumela ukuba uphucule.
Guqula useto oludingayo: Ukwenza iiyantlukwano ozifunayo kuseto lomdlalo wevidiyo kuya kukunceda ujongane ngokulula xa udlala. Olunye useto oluya kuguqulwa lunokwenza isisombululo, iaudiyo, ulawulo okanye nantoni na ekuvumela ukuba wenze ngcono.
Amaqonga ekuya kuthi emva kokulungileyo kunye nokubi 2 kudlalwe
Inguqulelo entsha ye-Beyond Good & Evil 2 yeyakhe wonke umntu, ukuba ungumntu othanda induduzo okanye ukhetha iPC, Umdlalo unokuvavanywa ngeendlela ezahlukeneyo. Ngekhonsoli, ungayifumana IPlayStation, iXbox nabanye, bakunika ithuba lokuzama ekhaya okanye qhagamshelana nabanye abantu kwi-intanethi.
Ngendlela efanayo iya kufumaneka dlala efini usebenzisa amaphepha afana neStam kunye neStadia kwikhompyuter. Ngale nto ayizukufuneka ukuba ube nekhonsoli yamva nje kwintengiso okanye ikhompyuter eneempawu ezizodwa kuyo nidlale imidlalo
Into oyikhethayo iya kuba nokunento yokwenza nezinto ozikhethayo kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Ngale ndlela unako fumana ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2 kwiinguqulelo ezahlukeneyo. Eyona nto ifunwayo kukufikelela kubaphulaphuli abanokubakho kwaye wenze ukonwabela umdlalo kube lula kunye nawo wonke umntu.
Ngokunjalo, nganye yeenguqulelo zinokhetho lokonwabisa kwaye zenze ukuba kufumaneke ukubakho Yonwabela amava abalaseleyo ngokudlala uwedwa okanye ngokwamaqela.
Ndidinga ukuthenga ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2, ndingaya phi?
Isinyathelo sokuqala fumana ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2 kukutyelela ivenkile ekufutshane nekhaya lakho, okanye leyo uhlala usiya kuyo. Wakuba ufikile umhla wokukhutshwa komdlalo wakho, kwaye kwiintsuku ezilandelayo, ungayibona ifumaneka kuwo onke amaqonga ayo.
Yimeko ye imidlalo yeengcebiso njengePlayStation, okanye iXbox. Ngokukodwa, kubo bonke abalandeli abavelisa iimvakalelo ezilungileyo ngokuba nelifa labo Inguqulelo yoqobo yemidlalo oyithandayo.
Nangona kunjalo, awuyi kuyifumana kuphela kwiivenkile ezibonakalayo, kodwa uya kuba nakho ukuyifumana iivenkile zomdlalo wevidiyo okwi-intanethi okanye ngaphakathi amaqonga akwi-intanethi apho kufuneka ube neakhawunti enye kuphela xa uthenga.
Si uthenga kwezi venkile zikwi-intanethi, ugcina ixesha kunye nomsebenzi kwaye umdlalo wakho uya kufikelela ekhayeni lakho, okanye ungathenga nohlobo olubonakalayo, ulikhuphele kwaye ulifake kwikhonsoli yakho.
Ngaphandle kwevenkile yomdlalo wevidiyo, kukho enye indlela yokudlala phantsi kwephakheji yokubhaliselwa. Kule meko, awuthengi umdlalo ngokwawo, kodwa ilungelo lokonwabela iintlobo ngeentlobo zemidlalo kangangexesha elithile. Injalo imeko yeStadia okanye iSteam.
Sebenzisa le nkonzo kuthetha, kwixesha elifutshane, a intlawulo ephantsi kunokuba uthenge umdlalo wevidiyo wokuqala, kunye nokuvumela ukuba ukonwabele izihloko ezininzi ngexesha elithile.
Ufunda njani ukudlala ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2?
Sonke siqala njengee-novice ngalo lonke ixesha sifumana into entsha, ngaphandle kwamava esinawo kweminye imiba, ukuqala into kwasekuqaleni kuhlala kungamava ahlukileyo, kodwa uzolile, ngokuziqhelanisa uya kuba yingcali.
Kuthekani Ukuziqhelanisa kwenza inkosi inokusetyenziswa kwimidlalo. Okukhona uziqhelisa, kokukhona uhlengahlengisa kuLawulo olungaphaya kokuLungileyo kunye nokubi kunye neempendulo ze-AI. ube yenye yezona zinto zibalaseleyo kwiNgaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2, gcwalisa umonde kunye nentando elungileyo, kwaye uziqhelanise ixesha elide.
Enye into enceda ukwandisa ubuchule bakho yile funda abachasi bakho. Ungayibona into eyenzayo elungileyo nengalunganga. Uyakufuna yazi ukuba badlala njani abachasi bakho. Nokuba zizii-NPC okanye abadlali bokwenyani, bonke basebenzisa iintshukumo kunye neendlela zokuba, ukuba uyabazi, uya kuba nakho ukubona indlela yokubabetha ngokulula kwaye babe ngabona baphambili.
Xa ufumene ukuba buthini ubuthathaka bakhe, mbethe apho iyeyona nto ibuhlungu kwaye umoyise. Ukuba linyathelo elinye phambili kuhlala kuyinzuzo enkulu.
Kanye njengokuba uhlalutye imbangi yakho, nawe kufuneka uphonononge kwaye uqonde ezakho iindlela kunye neziphumo abakunika zona. Nokuba wenza kakuhle, ngokuqinisekileyo ungaphucula ngaxa lithile. Hlaziya amaqhinga akho imihla ngemihla kwaye ufumane apho unokuba ngcono.
Ukongeza kwi fumana ukungaphumeleli kweentshaba zakho, Uya kuqaphela ukuba yintoni amandla abo. Kwimfuno yakho yokufumana eyona nto ibalaseleyo, kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni oza kuyithatha ngesihlandlo ngasinye. Ukuba kunjalo, ngekhe kubi ukubona ukuba zeziphi izinto ezisebenzela abanye kwaye zibabumbele kwindlela yakho yokudlala.
Okokugqibela, musa ukwenza ngokungxama, bambelela kwizicwangciso zakho kwaye usete iinjongo zexesha elifutshane. Ngale ndlela uya kuthi ufikelele usukelo lwakho ngokuthe ngcembe. Ukuba ulandela ezi ngcebiso, uya kuba kufutshane nokuba eyona ilungileyo ngaphaya kokuLungileyo kunye nokubi 2.
Ilungelo lokushicilela © 2021 · Onke amalungelo agciniwe · AdraInformatica
Ngama-90 Retro Imixholo yeOrganic · Ukutya kweRSS · Ukufikelela